यी हुन् बलिउडका चर्चित अविवाहित ११ हिरोइन, कतिलार्इ मन पर्छ ?
बलिउडमा थुप्रै हिरोइन अविवाहित छन् । अनुष्का शर्माले २९ वर्षको उमेरमा ११ डिसेम्बरमा प्रेमी विराट कोहलीसँग बिहे गरिन् । अनुष्काको बिहेपछि अविवाहित हिरोइनहरूलाई बिहेको दबाब बढेको छ । परिवार मात्र होइन, आफन्ती तथा मिडियाले समेत फलानीले बिहे गरिन्, तिम्रो कहिले ? भनेर वाक्क लगाउने गरेका छन् । भारतीय अनलाइनले बलिउडका केही चर्चित अविवाहित हिरोइनबारे एउटा रिपोर्ट तयार गरेको छ :
सुस्मिता ४२ वर्षकी भइन् । सन् १९९६ को ‘दस्तक’ फिल्मबाट डेब्यु गरेकी उनी पनि अविवाहित छिन् । निर्देशक विक्रम भट्ट हुँदै उनको व्यापारीहरू सञ्जय नारंग, इम्तियाज खत्री, बन्टी सचदेवा, ऋत्विक बसिम, सबिर भाटिया, अभिनेता रणदीप हुड्डा, विज्ञापन निर्देशक मानव मेनन, निर्देशक मुडासर अजिज, क्रिक्रेटर वासिम अक्रामलगायतका झन्डै एक दर्जन पुरुषसँग प्रेम चल्यो । तर, उनले कहिले बिहे गर्छिन् ? यो भने उनी आफैँलाई थाहा छैन ।